Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka Oof-wareenka (warbixin) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka Oof-wareenka (warbixin)
Dalalka dunida ayaa manta u dabbaaldegaya xuska munaasabadda 12-ka Nofembar oo ah maalinta wacyigelinta cudurka ku dhaca sanbabaha ee loo yaqanno Oof-wareenka
Oof-wareen waa xanuun keena xaalad barar ah oo la soo dersasambabada,waxaana calaamadaha sida caadiga ah lagu garto ka mid ah qufac qalleyl ah, laab xanuun, qandho, iyo neefsashada oo ku adkaata qofka.
Cudurkaasi,waxaa badanaa keena caabuqa fayrasyada ama bakteeriyada,iyadoo nuuc ka mid ah lagu daaweyn karo tallaal ama daawada Antibiyootik,halka nuucyada kale ee qatarta ah ay u baahan yihiin in la isticmaalo oksijiinta mudada ay socoto daaweynta.
Qarnigii 20-aad markii la bilaabay isticmaalka daawada antibiyootiga iyo tallaalada ,waxaa hoos u dhacay cudurkaasi oo sanad kasta saameyn jiray ilaa 450 milyan oo qof oo adduunka ah,isla markaana dili jiray 4-milyan.
Inkastoo cudurkaan uu yahay mid halis ah,haddana.waxaa saacida wasaqowga hawada ee ay sababaan qiiqa ay sii daayaan warshadaha,gawaarida,gaaska iyo sigaarka la cabo,kuwaas oo noqon kara qodobada ugu horreeya ee soo dedejiya qatarta fjimashada oof wareenka.
Labadii sano ee la soo dhaafay waxaa dunida ka dilaacay cudurka Covid 19- oo ka mid ah cudurada ku dhaca sanbabaha,wuxuuna sii laba jibaay fafidda cudurka ,isagoo keenay dhimasho degdeg ah.
Xuska Maalintaan waxay gacan ka geysataa sidii dhibaatada caafimaad loo gaarsiin lahaa dadweynaha,isla markaana loo dejin lahaa siyaasad cad oo ka tarjumeysa in si isku mid ah loola dagaallamo cudurka.
Qorshaha Caalamiga ah ee Ka-hortagga iyo Xakamaynta cudurka oof-wareenka oo fikrad ahaan ka yimid WHO,ayaa qeexaya in 1 dad ka badan milyan noloshooda la badbaadin karo sannad kasta,haddii la helo daawooyin tayo leh oo la gaarsiiyo dalalka caalamka,gaar ahaan kuwa saboolka ah.
Xuska sanadkaan ayaa ku soo beegmayxilli caalamka ay walwal ka muujinayaan xowliga uu ku socdo cudurka Covid 19 iyo wax ka qabasho la’aanta wasaqowga hawada oo la tilmaamay in ay lug ku leeyihiin ama ay saacidaan nuucyada cudurada ee ku dhaca sambabaha ama neef mareenka.
Si kastaba ha ahaatee, cudurka Oof-wareenka ayaa weli ah qatar ugu weyn ee u baahan in si wadajir ah loo wajaho wax ka qabashada cudurkaasi.
Previous articleMaamulka Maxkamadda Sare ee dalka oo la kulmay madaxda Garsoorka Ruwanda
Next articleBakool:dad xoolo dhaqato ah oo ku waxyeeloobay qarax miino.
MADAXWEYNE XASAN SHEEKH MAXAMUUD OO MAGACAABAY AGAASIME KU-XIGEENKA GUUD EE...